အပြိုင်အဆိုင် အနိုင် ဘောလုံးပွဲ – Ye Htut's Blog
အပြိုင်အဆိုင် အနိုင် ဘောလုံးပွဲ
Posted byye htut February 2, 2022 Posted inEssayTags:yehtutarticle
ဘဝမှာ ဘောလုံးပွဲတွေအများကြီး ကြုံခဲ့ဖူးပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ငါးဆယ်ကျော် ကလေးဘဝက ကြုံခဲ့တဲ့ ဘောလုံးပွဲလောက် ဘယ်ပွဲမှ မှတ်မှတ်ရရမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ တစ်သက်လုံး တသသ မရှိခဲ့ဘူး။ သင်ခန်းစာယူလို့ မဆုံး မဖြစ်ခဲ့ဘူး။
အဲဒီ ဘောလုံးပွဲဟာ ကျွန်တော့်လက်ထဲကို ထူးခြားတဲ့ဘောလုံး တစ်လုံးရောက်လာတာက အစပြု ခဲ့တာပါ။ ထူးခြားတဲ့ဘောလုံး အကြောင်းမပြောခင် ဘောလုံးရလာတဲ့ အချိန်ကာလကို အရင် ပြောမှ ပြည့်စုံမယ်။ အဲဒီအချိန်က ၁၉ ၆၈- ၆၉ ၊ ကျွန်တော်က လေးတန်းကျောင်းသား။ အဖေက နာဂ တောင်တန်းက မြို့လေးမှာ တာဝန်ကျတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မူလတန်းကျောင်းလေးမှာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကစားနည်းက ဘောလုံးကန်တာပဲ။ ဘောလုံးဆိုတာလည်း ကောင်းကောင်း ကန်းကန်းမဟုတ်ဘူး။ မြို့ထဲ တရုတ် စတိုးဆိုင်က ရောင်းတဲ့ ကော်ဘော်လုံးပဲ။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် ဆိုတော့ တကယ့်ဘောလုံးဆိုတာ ကုန်သွယ်ရေးက ရောင်းမှ ဝယ်လို့ရတာ။ ရွှေလောက်နီးနီး ရှားတယ်။
ကော်ဘောလုံးဆိုတော့ နည်းနည်းကန်လိုက်တာနဲ့ ပေါက်ပြီ။ ဘောလုံးပေါက်တိုင်း အသစ်ဝယ်ဖို့ ပူဆာရင်လည်း အိမ်ရဲ့ တုတ်စာမိမှာသေချာသလောက်ဖြစ်နေတော့ ကလေးတွေဟာ ကော်ဘောလုံး အပိန်အရှုံ့နဲ့ ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရတယ်။ အဲဒီလို အချိန်မှာ ကျွန်တော့်အဖေက မန္တလေးသွားရတယ်။ မန္တလေးက ပြန်လာတော့ သားရေဘောလုံးတစ်လုံး၊ လေထိုးတံတစ်ချောင်း၊ လေထိုးပိုက်တစ်ခု ပါလာတယ်။ ဘောလုံးက တရုတ်လုပ်၊ ကြိုးချုပ်လို့ခေါ်တဲ့ ဘောလုံး။ ကော်ဘောလုံးနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ ဘောလုံးပေါ့။ ဒါ့အပြင် အဖေက ဘောလုံးကွင်း အသေးလေးဖောက်ပေးတယ်။ ဂိုးကျဉ်းကန်ဖို့အတွက် သစ်သားတန်းနဲ့ ဂိုးတိုင် အသေးလေးလုပ်ပေး တယ်။ ဂုံနီအိတ်တွေ နဲ့ ဂိုးပိုက်လေးလုပ်ပေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဖေ့ကျေးဇူးကြောင့် ဘောလုံးပိုင်၊ ကွင်းပိုင်ဖြစ်လာတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သူငယ်ချင်း တွေကြားမှာ အကောင် ဖြစ် လာတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ မတည့်ရင် ဒီကွင်းမှာ ကစားလို့မရဘူး။ လူခွဲရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူ ရ အောင် ယူတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဝင်ကန်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဒိုင်လုပ်တယ်။ ဒိုင်ဆုံးဖြတ်ရင် လက်ခံ၊ ပြန်မပြောနဲ့။ နောက်လာကစားလို့မရဘူးဖြစ်သွားမယ်။ တစ်ချို့ မခံချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက မလာ ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကြာကြာမနေနိုင်ပါဘူး။ ကော် ဘောလုံး အစုတ်နဲ့ မကန်ချင်တော့ မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်း ပြီး ပြန်လာရတာပဲ။
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အရုပ်ကားချပ်ကြေး၊ သားရေကွင်းကြေးကန်ကြတယ်။ ဒီလိုကန်ရင်တော့ ကျွန်တော်ဘက်က လူတစ်ယောက်ပိုယူတယ်။ ငါ့ကွင်း၊ ငါ့ဘောလုံး ၊ ငါမပါရင် မင်းတို့ ပွဲမဖြစ် ဘူး။ ကန်ချင်ရင် ငါ့ဘက်ကို တစ်ယောက်အကြောပေး ဒါပဲ။ များများမပြောဘူး။ သို့သော် လောင်းကြေးပါတဲ့ ပွဲမျိုးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကန်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒိုင် လုပ် ဆိုတာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ မ ျှမ ျှတတ ဖြစ်အောင် ဒိုင် တစ်ယောက်ထားတယ်။
ဒိုင်လူကြီးကတော့ ဝေးဝေးမရှာရပါဘူး။ အဖေ့ အနားမှာ အမြဲတမ်းနေတဲ့ ဦးလေးကြီးက ဒိုင်လူကြီး ပေါ့။ သူက ဘောလုံး မကန်တတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာမရှိဘူး။ သူ့အလုပ်က ကျွန်တော်က “ ဦးလေး” လို့အော်လိုက်ရင် ခရာမှုတ်လိုက်ဖို့ပဲ။ ဘာပြစ်မှုလည်းဆိုတာ ကျွန်တော်ကပဲ ပြောပြ ရတာပေါ့။ တစ်ဖက်အသင်းက ဆင်ခြေတက်ရင်လည်း “ ဟေ့ကောင်တွေ ဒိုင်ကို ပြန်မပြောနဲ့၊ မကျေနပ်ဘူးလား” ဆိုပြီး ဖြဲချောက်ရတာပဲ။
ဒီတော့ ကားချပ်ကြေး ကန်တိုင်း ကျွန်တော်တို့ အသင်းပဲ နိုင်တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကြေးကြီးပွဲ ကြီး ကန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ ကြေးကြီးတယ်ဆိုတာက အရုပ်ကားချပ်ကြေးများတာကို ပြောတာ။ ကျွန် တော်တို့ခေတ်က ကားချပ်ဆိုတာ ကလေးပိုက်ဆံပဲလေ။ အရင်ပွဲနဲ့မတူတာက အဖေတပည့် ဦးလေးကြီးက ခရီးထွက်သွားတော့ ဒိုင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က စိတ်မပူဘူး။ အခု ဦးလေးကလည်း အဖေ တပည့်တစ်ယောက်ပဲ၊ အထာနပ်မှာပါပေါ့။ နောက်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း ကျွန် တော့်ဘက်က လူတစ်ယောက် အကြောယူထားသေးတယ်လေ။
လောကမှာ အရာရာဟာ ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာ တယ်မှန်တာကိုး။ ဒိုင် လုပ်တဲ့ ဦးလေးက “ ဦးလေး” လို့ လှမ်းအော်ရင်လည်း မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ သူ ဆုံး ဖြတ်တာကို ကန့်ကွက်တော့ ဒိုင်ကို ခံမပြောနဲ့လို့ သတိပေးတယ်။ ဟိုဘက်အသင်းကို ဘက် လိုက်နေသလားတောင် ထင်ရတယ်။ သူလုပ်တာနဲ့ တစ်ဘက် အသင်းကကောင်တွေ အားတက်ပြီး ကျုံးကန်၊ ကျွန်တော့်တို့ဘက်ကတော့ တစ်သက်လုံး ဒိုင် အားကိုးနဲ့လုပ်စား လာတာဆိုတော့ ခြေပျက်။ နောက်ဆုံးတော့ ဝက်ဝက်ကွဲရှုံးတော့တာပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒါ ကျွန်တော့်ကွင်းလေ။ ဒီလို လာလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲ။ ပွဲပြီးတော့ ဘောလုံးကို သိမ်း၊ ဒိုင် ညစ်လို့ ငါတို့ရှုံးတာ။ အရင်ဒိုင် ဦးလေးကြီးလာမှ ပြန်ကန်မယ်ဆိုပြီး ပြောရတာပေါ့။ ဟိုဘက် အသင်း ကလည်း ဘယ်ခံမလဲ၊ ဒီတစ်ပွဲက ကြေးများတာကိုး။ အတိုချုပ်လိုက်တော့ နှစ်ဘက် ရန်ဖြစ်ပြီး ထိုးကြိတ်လိုက်တာ အားလုံး ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ရုံးခန်းရောက်တော့တာပဲ။
ကျွန်တော်တို့ မူအုပ်ဆရာကြီး ဦးထွန်းမြင့် ဆိုတာ စည်းကမ်းကြီးတော့ သူ့ရုံးခန်းရောက်တယ် ဆိုရင် အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး။ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် နားထောင်ရင်းနဲ့ နဂို က ညိုမှောင် နေတဲ့ ဆရာကြီးမျက်နှာက မဲမှောင်လာတယ်။ နှာခေါင်းဝက လေသံ တရှုးရှုးထွက်လာတယ်။ ဒါဟာ ဆရာကြီး ဒေါသ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းလာပြီ ဆိုတဲ့ သတိပေးခေါင်းလောင်းသံပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ရှေ့မှာ လက်ပိုက်ရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်လုံးတွေက တဖြည်းဖြည်း ကျုံ့လာကြတယ်။
အားလုံးနားထောင်ပြီးတော့ ဆရာကြီးက ကြိမ်လုံးနဲ့ စားပွဲကို တဖြန်းဖြန်း ရိုက် ရင်း “ ရဲထွဋ် ၊ မင်း သတ္တိရှိရင်၊ လုပ်ရဲလို့ ခံရဲတယ် ဆိုရင် လူမိုက်လုပ်ကွ၊ လူညစ်တော့ မလုပ်နဲ့။ ယောကျ်ား သိက္ခာကျတယ်။ အခု ကြည့်စမ်း၊ မင်း ဖောက်တဲ့ ကွင်း မှာ မင်းစည်းကမ်းအတိုင်း လူလည်း အကြောယူထားသေးတယ်။ ဒိုင် ကို ပြန်မပြောနဲ့ဆိုတာလည်း မင်းသတ်မှတ်တာပဲ။ မင်းနိုင်နေ တုန်းက အကောင်း၊ ရှုံး တော့မှ ဒိုင်ညစ်တယ်၊ ပြန်ကန်မယ် ဆိုတော့ ဒါ သက်သက် ညစ်တာကွ။ မင်း လူညစ်ပဲ” လို့ အော်တော့တာပဲ။ ဇာတ်သိမ်းတော့ ရန်ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံး တစ်ယောက် ကို သုံးချက်၊ ကျွန်တော်ကတော့ ညစ်ကျယ်ကျယ်လုပ်တဲ့အတွက် အပိုဆောင်း ငါးချက် အဆော်ခံ ထိတယ်။ ဘောလုံးကိုလည်း ဆရာကြီးက ကျောင်းပိုင်အဖြစ်သိမ်းလိုက်တယ်။
အရိုက်ခံရတာက မနာဘူး။ ဘောလုံး အသိမ်းခံရတာတော့ အတော်နာတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ခြေစွမ်းက ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီဘောလုံး ကြောင့်သာ ကွင်းထဲမှာ ဆရာကြီးလုပ်နေရ တာ မဟုတ်လား။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာကြီးကို အယူခံဝင်တယ်။ မရဘူး။
ဒါနဲ့ အဖေ့ကို ဘောလုံးအသိမ်းခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဆရာကြီးဆီက ပြန်တောင်းပေးဖို့ ပြော တယ်။ အကြောင်းစုံ သိသွားတဲ့ အဖေက “ မင်းကို လူချစ်လူခင်များအောင်၊ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ ပိုစည်းလုံးအောင် ဘောလုံးဝယ်ပေးတာ၊ မင်းက ညစ်တော့ ခံပေါ့ကွာ” လို့ သြဘာပေးတယ်။ ဆရာကြီးသာ မရိုက်ရင် သူက ရိုက်ပြီး အပြစ် ပေးမယ့်ပုံပဲ။ အဲဒီမှာ လူူညစ် ဆိုရင် အဖေကတောင် လက်မခံဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်သွားတယ်။
အဲဒီဘောလုံးပွဲက ကျွန်တော့်အတွက် တစ်သက်တာ သင်ခန်းစာပဲ။ ဘ၀ မှာ ဘယ်လို ပြိုင်ဆိုင်မှု မျိုးနဲ့ ကြုံကြုံ ညစ်ပြီး အနိုင်ယူဖို့ မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ကိုယ့်အထက် က ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်အောက်က ဖြစ်ဖြစ် ညစ်တတ်တဲ့ လူတွေကို တွေ့ရင်လည်း လေးစားလို့ မရတော့ ဘူး၊ ခင်မင်စိတ်မရှိတော့ဘူး၊ စာနာစိတ်မထားနိုင်ဘူး။
ကျွန်တော် အဲဒီမြို့လေးက ပြောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်း ဆရာကြီးနဲ့ မဆုံဖြစ်တော့ ဘူး၊ ဆရာကြီး ကွယ်လွန်သွားတာတောင် နှစ်အတော်ကြာမှ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် လူညစ်တွေ တွေ့ တိုင်း
“ သတ္တိရှိရင်၊ လုပ်ရဲလို့ ခံရဲတယ် ဆိုရင် လူမိုက်လုပ်ကွ၊ လူညစ်တော့ မလုပ်နဲ့။ ယောကျ်ား သိက္ခာကျတယ်” ဆိုတဲ့ ဆရာကြီး စကားကို ပြန်သတိရတယ်။
အခုနေ ဆရာကြီးများရှိရင် ကြိမ်လုံး တဝင့်ဝင့်နဲ့ ဘာတွေများပြောနေမလဲ မသိဘူး။
3 thoughts on “အပြိုင်အဆိုင် အနိုင် ဘောလုံးပွဲ”
သဘောတရားကနေ တရားသဘောပြောင်းသွားစေတဲ့ စာစုတခုပါခင်ဗျ”””
Nice story. It made me remember our childhood during မဆလ too.
တစ်ဘက်လူက ညစ်ရင်ကော ဘယ်လို တုံ့ပြန်ဖြစ်မလဲ သိချင်မိပါတယ်.